Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » In badan oo Thailand ah ayaa dib u furmaya 3 toddobaad gudahood
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Furitaanno badan oo Thailand ah
Phuket arag masraxa dib-u-furista Thailand tagitaanka tan iyo bilowgii COVID-19 iyadoo la adeegsanayo barnaamijka dalxiiska Sandbox oo ah hageheeda.
Marka lagu daro Samui Plus iyo 7+7 barnaamijyada fidinta, tani waxay muujisay inay aad muhiim ugu tahay dib u soo nooleynta dalxiiska Thai.
In ka badan 27,000 oo socdaalayaal caalami ah ayaa booqday Thailand iyagoo hoos imanaya Phuket Sandbox, Samui Plus, iyo barnaamijyada fidinta 7+7.
Thailand ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu furtay dalxiiska laga bilaabo 1 -da Luulyo, 15 -ka Luulyo, iyo Ogosto 16 -keeda.
Iyada oo ah halka tijaabada ah ee dib -u -furitaanka, Phuket Sandbox waxay soo dhoweysay 26,400 booqdayaal labadii bilood ee ugu horreysay, laga bilaabo bilowgeedii 1 -da Luulyo illaa Ogosto 31, taasoo dhalisay dakhli dhan 1,634 milyan Baht.
Dakhliga wuxuu ka koobnaa 565 milyan Baht hoy, 376 milyan Baht xagga wax iibsiga iyo dalxiisyada, 350 milyan Baht cuntada iyo cabitaanka, 229 milyan Baht adeegyada caafimaadka iyo caafimaadka, iyo 114 milyan Baht kuwa kale. Celceliska qiimaha fasaxa booqdayaasha ee Phuket bishii Luulyo-Ogosto wuxuu ahaa 61,894 Baht, halka 58,982 Baht la diiwaangeliyay bishii Luulyo.
The Sanduuqa Phuket SandboxShanta suuq ee isha ugu weyn waxay ku hareen USA iyadoo ay yimaadeen 3,482, waxaa ku xigay UK oo timid 3,351, Israa'iil oo timid 2,909, Jarmalka oo yimid 2,092, iyo Faransiiska oo yimid 2,083.
Waxaa si buuxda loo tallaaley oo aan u baahnayn in la karantiiliyo, 26,400 oo timi ayaa Phuket ku yimid duulimaadyo caalami ah oo toos ah oo ay maamulaan shirkado waaweyn oo ka kala yimid meelo adduunka ah. Waxaa ka mid ahaa Thai Airways International oo ka timid Copenhagen, Frankfurt, Paris, London, iyo Zurich; Etihad Airways oo ka timid Abu Dhabi; Qatar Airways oo ka timid Doha; EL AL Israel Airlines oo ka timid Tel Aviv; Cathay Pacific oo ka timid Hong Kong; Emirates oo ka timid Dubai, iyo Singapore Airlines oo ka timid Singapore.
Dadka imanaya ayaa soo saaray 366,971 habeen oo qol ah oo ku yaal SHA Plus hoteellada la xaqiijiyay ee Phuket - 190,843 habeen bishii Luulyo iyo 176,128 habeen bishii Ogosto, siday u kala horreeyaan. Iyada oo 95,997 habeen qol ay hadda ku jiraan buugaagta bisha Sebtember, wadarta saddexda bilood ee Luulyo ilaa Sebtember ayaa hadda ah 462,968 habeen qol. Si aad u sii eegto, wadarta guud ee habeennada qolka muddada Oktoobar 2021 illaa Febraayo 2022 waa 24,947 habeen qol.
Dalxiisayaasha Phuket Sandbox waxaa laga rabaa inay joogaan hoteellada SHA Plus ee shahaadada leh ee ku yaal Phuket si ammaankooda loo kordhiyo. Shahaadada SHA Plus waxay muujineysaa in huteel uu buuxiyey tallaabooyinka amniga si loo xakameeyo COVID-19, iyo sidoo kale in ugu yaraan 70% shaqaalaheeda si buuxda loo tallaalay.
Iyada oo ay weheliso tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee lagama maarmaanka u ah socdaalayaasha caalamiga ah ee booqanaya, barnaamijka tallaalka ee Phuket illaa Ogosto 31 wuxuu arkay 92% dadka maxalliga ah ayaa qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay, halka 75% ay dhammaystireen taxanaha laba-qiyaasood.
Calaamadeynta labaad ee Taariikhda Thailandns si dib loogu furo dalxiiska, barnaamijka Samui Plus waxaa la bilaabay 15-kii Luulyo, taasoo u oggolaanaysa booqdayaasha inay booqdaan Ko Samui, Ko Pha-ngan iyo Ko Tao. Waxay tan ku samayn karaan iyagoo toos u galaya Samui ama, laga bilaabo 16ka Ogosto, iyagoo u safraya halkaas ka dib markii ugu horraysay ee ay 7 habeen seexdeen Phuket Sandbox, ikhtiyaarka dambe oo 347 booqde ay sidaas sameeyeen.
Bishii koowaad iyo badhkii, laga bilaabo Luulyo 15 illaa Ogosto 31, barnaamijku wuxuu soo dhoweeyey 918 booqde, oo leh 6,329 habeen oo qol ah, oo soo saaray dakhli dhan 37.6 milyan Baht. Inta badan dadkaan yimid waxay ka yimaadeen dalalka Yurub iyo Mareykanka.
Caawinta fududeynta barnaamijka ayaa ah Bangkok Airways '92 duulimaadyo marin -u -xir ah oo u dhexeeya Samui iyo Bangkok si loogu sii gudbiyo/loogu wareejiyo rakaabka Samui Plus oo isku xira caasimadda Thailand. Intaa waxaa dheer, diyaaradda ayaa sidoo kale ka shaqeysa duulimaadyada u dhexeeya Phuket iyo Samui oo loogu talagalay booqdayaasha Phuket Sandbox.
Seddexdii bilood ee ugu dambeysay sannadkan illaa 9ka Diseembar, Samui Plus wuxuu hadda ka diiwaangaliyay buugaagta 9,195 qol oo ka yimid 860 booqde. Kuwaas waxaa ka mid ah 7,397 habeeno qol oo lagu xareeyay 591 booqdeyaal hoostaga Samui Plus iyo 1,788 habeen oo qol oo ay booqdeen 269 dalxiisayaal ah oo ku hoos jira Phuket Sandbox iyo 7+7 Extension.
Phuket Sandbox 7+7 Kordhinta
Waxaa la bilaabay Ogosto 16, 2021, barnaamijka fidinta Phuket Sandbox 7+7 waa qaybtii ugu dambeysay ee 'Dib -u -furista Thailand' taas oo dalxiisayaasha la siinayo fursado badan oo ay ku booqdaan meelo badan booqashadooda dalka.
Barnaamijku wuxuu u saamaxayaa socdaalayaasha caalamiga ah inay yareeyaan joogitaanka qasabka ah ee Phuket laga bilaabo 14 illaa 7 habeen, ka dib 7 habeen oo kale ayaa lagu bixin karaa Krabi (meelaha loo qoondeeyay Ko Phi Phi, Ko Ngai, ama Railay Beach), ee Phang-Nga (gudaha Khao Lak ama Ko Yao), ama Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan, ama Ko Tao).
Laga soo bilaabo Phuket, Surat Thani's Samui, Ko Pha-ngan iyo Ko Tao waxaa lagu tagi karaa Bangkok Airways 'duullimaadyada gudaha ee tooska ah ee Phuket; Krabi's Ko Phi Phi, Ko Ngai iyo Railay Beach waxaa gaari kara doonta SHA Plus ee la xaqiijiyay iyo adeegyada doonta oo ka timaada meelaha la ansixiyay; Khao Lak ee Phang-Nga waxaa lagu gaari karaa adeegyada wareejinta baabuurta ee SHA Plus ee Phuket, halka Ko Yao Noi ama Ko Yao Yai lagu gaari karo doonnida SHA Plus ee la xaqiijiyay iyo adeegyada doomaha ee laga soo xiro xeerarka la oggolaaday.
Goobaha soo socda ee dib loogu furi doono si buuxda loogu talaalay socdaalayaasha caalamiga ah
Goobo badan oo ka kooban Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, iyo Pattaya, ayaa la qorsheynayaa in dib loo furo Oktoobar 1, 2021.
Tani waa iyada oo Thailand ay sii waddo horumarka la taaban karo ee tallaalka dadweynaha dalka, tan iyo markii siideynta ballaaran ay bilaabatay Juun 7.
Laga bilaabo Febraayo 28 illaa 4 Sebtember 4, 2021, wadar ahaan 9,879,371 qof oo waddanka oo dhan ayaa si buuxda loo tallaaley, ama dhammaystiray laba-qiyaasood oo taxane ah oo loogu talagalay tallaalka COVID-19, 25,104,942 qof oo kale ayaa qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay, halka 603,363 qof oo kale qaatay tallaalkoodii saddexaad, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha.